Muvhuro 4 Gumiguru 2021
Bhuku Chinyorwa chakatevedzana ebhuku remabhuku akaunganidzwa eChinyakare Chinese calligraphy uye pendi inobudiswa naNanjing Zhuzi Art Museum. Iine nhoroondo yayo refu uye hunyanzvi maitiro, echinyakare Chinese pendi uye calligraphy vanochengetwa nekuda kwavo kwakanyanya kwehunyanzvi uye inoshanda kukwezva. Paunenge uchigadzira muunganidzwa, zvisingaonekwi, mavara, uye mitsara zvaishandiswa kugadzira hunhu hwakajeka uye kuratidza nzvimbo isina chinhu mune sketch. Izvo zvisingabatsiri zvinowirirana nevatambi mune zvetsika kupenda uye calligraphy mafashoni.
Svondo 3 Gumiguru 2021
Kutora Mifananidzo Sango reJapan rinotorwa kubva mune yechitendero chechiJapan. Imwe yevanamato vekare veJapan mweya. Mhuka kutenda kwekuti zvisikwa zvisiri vanhu, zvichiri hupenyu (zvicherwa, zvekuveza, nezvimwewo) uye zvisingaonekwi zvinhu zvine zvakare chinangwa. Photography yakafanana neiyi. Masaru Eguchi ari kupfura chimwe chinhu chinoita kuti vanzwe muchinhu ichi. Miti, huswa uye zvicherwa vanonzwa kuda kwehupenyu. Uye kunyange zvigadzirwa zvekugadzira zvakadai semadhamu akasara mune zvakasikwa kwenguva yakareba anonzwa kuda. Sezvo iwe paunoona izvo zvisati zvawanikwa, ramangwana richaona mamiriro aripo.
Mugovera 2 Gumiguru 2021
Cosmetics Muunganidzwa Iyi yekuunganidza inokurudzirwa neakawandisa zvipfeko zvevakadzi vekare vekuEurope vakadzi uye neshiri yekuona kweziso. Mugadziri akabvisa mafomu eaviri nekuvashandisa seyakagadzirwa prototypes uye akasanganiswa neyakagadzirwa chigadzirwa kuti agadzire chimiro chakasiyana uye pfungwa yemafashoni, kuratidza fomu rakapfuma uye rine simba.
Chishanu 1 Gumiguru 2021
Dhizaini Remabhuku Josef Kudelka, mutambi anozivikanwa munyika yose, akabata mifananidzo yake munyika dzakawanda pasi rose. Mushure mekumirira kwenguva refu, gypsy-themed Kudelka yekuratidzira yakazoitwa muKorea, uye bhuku rake remifananidzo rakagadzirwa. Sezvo yaive yekutanga kuratidzira muKorea, pakanga paine chikumbiro kubva kune munyori kuti aida kugadzira bhuku kuti anzwe Korea. Hangeul naHanok mavara echiKorea uye zvivakwa zvinomiririra Korea. Mavara anoreva kwepfungwa uye kugadzirwa zvinoreva chimiro. Yakafemerwa nezvinhu zviviri izvi, yaida kuronga nzira yekuratidza hunhu hweKorea.
China 30 Gunyana 2021
Ruzhinji Rwemhizha Kazhinji nharaunda nharaunda dzinosvibiswa nekusapindirana-uye kweukama-kwega kusagadzikana kwevagari avo izvo zvinoguma nekuvhiringidzika kunooneka uye kusingaoneki munzvimbo dzakatenderedza. Iko kusaziva kwechikonzero chekushushikana uku ndechekuti vagari vanodzokera mukusagadzikana. Uku kutsika kwetsika uye kwetsika yekukasira inokanganisa muviri, pfungwa, pamweya. Iwo mapikicha anotungamira, chikomba, chenesa, uye simbisa iyo "chi" yakanaka yenzvimbo, inotarisa pane zvinofadza uye zvine rugare zvibudiso. Nekuchinja kusinganzwisisike munharaunda mavo, ruzhinji rwakatungamirwa rwakaenzana pakati pezvinhu zvavo zvemukati uye zvekunze.
Chitatu 29 Gunyana 2021
Dhizaini Iyo yakakwiridzwa dhizaini zvinoenderana nepfungwa yemambokadzi uye chessboard. Nemaviri aya ari madema uye goridhe, dhizaini ndeyekuburitsa pfungwa yeakakwirira-kirasi uye reshape mufananidzo unoonekwa. Pamusoro peiyo simbi uye goridhe mitsara inoshandiswa mune chigadzirwa pachayo, chinhu chechino chiitiko chakavakirwa kuisa kuregedzera kwehondo svutugadzike chess, uye isu tinoshandisa kubatana kwematanho emwenje kugadzira utsi uye chiedza chehondo.
Eye of Ra' Ruzhinji Rwemaguta Maficha Maficha China 9 Zvita
NISSAN Calendar 2013 Kalendari Chitatu 8 Zvita
GlassOn 40 "inotungamirwa Tv Chipiri 7 Zvita
Bhuku Kutora Mifananidzo Cosmetics Muunganidzwa Dhizaini Remabhuku Ruzhinji Rwemhizha Dhizaini